Naya Bikalpa | स्थानीय निकायको अन्तिम संरचनामा कोही पनि तोकेका मान्छे हुँदैनन् - Naya Bikalpa स्थानीय निकायको अन्तिम संरचनामा कोही पनि तोकेका मान्छे हुँदैनन् - Naya Bikalpa
स्थानीय निकायको अन्तिम संरचनामा कोही पनि तोकेका मान्छे हुँदैनन्
प्रकाशित मिती: २०७६ श्रावण २७, ०८: ५९: १३
डा.प्रकाशशरण महत्त– सहमहामन्त्री नेपाली काँग्रेस
नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आषाढ २२ गतेदेखि पटक–पटक बस्दै र स्थगित हुँदै आएको छ । महिनौ दिनको बैठकमा दुई वटा विषयमा समेत टुङ्गो लाग्न सकिरहेको छैन ।
महामन्त्री पूर्णबहादु खड्काले १४ ओटा विषयमा छलफल गर्ने भन्दै राखेको प्रस्ताव अहिलेसम्म अन्तरिम संरचनामै अल्झिरहेको छ ।
स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहका नेतासम्मले वर्तमान नेतृत्वले कस्तो निर्णय दिन्छ भनेर हेरिरहेका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश भएको दुई ओटा विषय पनि काँग्रेसभित्रको गुटगत स्वार्थका कारण अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । नेता–नेताहरुबीच एक आपसमा दोषारोपण गर्ने कार्य चलिरहेकै छ । चौधौ महाअधिवेशन हत्याउनको लागि लागी परेका नेताहरुबीच सहमति नहुँदा आम कार्यकर्ता चिन्तित देखिन्छन् ।
यिनै समसायिक विषय र छिमेकी भारतका पूर्व विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजको आकस्मिक निधनका बारेमा नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत्तसँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले गरेका कुराकानीको सम्पादीत अंशः
काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक केही दिनको लागि स्थगित भएको छ, पार्टीभित्र सदस्यता विवाद बढेर गएकोले स्थगित भएको हो ?
यो सरासर गलत कुरा हो । पार्टीको निर्णय के भएको छ भन्ने कुरातिर नगइकन तपाई विवादको कुरो लेराआउनु भयो, त्यस्तो होइन । किनभने पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । त्यो के हो भने सर्वसम्मती निर्णयबाट अहिलेसम्म प्राप्त भएको पार्टीका क्रियाशील सदस्यताहरुको अध्यावधि मंसिरसम्म गर्ने । अद्यावधी गरिसकेपछि मंसिरभित्रै त्यो भन्दा अगाडि भइरहेको संरचना अनुसारको स्थानीय निकायका संरचनाहरुको टुङ्गो लगाउने । मंसिरपछि क्रियाशिल सदस्यताहरु अद्यावधी गरिसकेपछि हामीले महाधिवेशनको कार्यतालिका सहित अन्य कामहरु पनि सम्पन्न गर्ने भनेर निर्णय भइसकेको अवस्थामा विमति हुने गर्नुपर्ने कुरै छैन ।
तपाईले निर्णय भइसकेको अन्तरिम संरचना पार्टीको विधान विपरित भयो भनेर विमति भइरहेको छ नि ? तपाई के भन्नुहुन्छ ?
अन्तरिम संरचना बनाउने नै विधानमा व्यवस्था छ । गठन गर्ने व्यवस्था छ । अन्तरिम संरचना गठन नगरिकन हामीले क्रियाशिल सदस्यता दिने जुन हाम्रो प्रारम्भिक महाधिवेशनका मतदाताहरुनै नेपाली काँग्रेसको क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लगाउनको लागि अन्तरिम संरचना चाहियो । अन्तरिम संरचनाले क्रियाशिल सदस्यता दिन्छ । क्रियाशिल सदस्यताको नवीकरण गर्छ । त्यसो हुनाले त्यो अन्तरिम संरचना चाहियो ।
न्तरिम संरचना गठन गर्नको लागि हाम्रो विधानको ७२–४ ले अन्तरिम संरचना बनाउने व्यवस्था गरेको छ, त्यो अनुसारको व्यवस्था गर्नुप¥यो । त्यो काम हामीले तुरुन्तै गर्नुपर्ने छ । अन्तरिम संरचनाको टुङ्गो लगाउनको लागि एउटा निर्देशिका बनाउने के–के आधारमा अन्तरिम संरचना गठन गर्ने भनेर निर्देशिकाको आवश्यकता पर्छ । कसरी गर्ने ? भन्ने विषय निर्देशिका आएपछि तयार हुन्छ ।
तर त्यो निर्देशिका बनाउँदा विधान विपरित हुने कुरा पनि आइरहेको छ नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
विधानको भावना अनुसारनै त्यो निर्देशिका बन्छ । त्यो निर्देशिका बनाउनको लागि हामी पदाधिकारीहरु र महत्वपूर्ण साथीहरु सबैसँग सल्लाह गरेर त्यो निर्देशिका बन्ने काम अगाडि बढिराखेको छ । त्यो करिब–करिब अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको छ । निर्देशिकालाई केन्द्रीय समितिमा राख्नुपर्दछ । निर्देशिकामा के–के राख्ने भन्ने विषयमै बुँदागत रुपमा सरसल्लाह भइरहेको छ ।
नेपाली काँग्रेसभित्र सहमति भन्दा गुटगत स्वार्थ हाबी भएको कारण भागवण्डा नमिलेको हो ?
होइन, होइन । यसमा भागवण्डा केही हुँदैन । यो गठन गर्ने चाँही एउटा विधी क्राइटेरियामा विधानको व्यवस्था अनुसार हुन्छ । त्यो विधानको व्यवस्थाले एउटा कुराको रोडम्याप बनाउँछ ।
त्यही हुन्छ, त्यहाँ कुनै गाउँ, नगर क्षेत्रमा फलानो भयो भनेर यहाँ तोक्ने हुँदैन । त्यो तोक्ने व्यवस्था हुँदैन । त्यसकारण कुनै पनि त्यो अन्यौल सुनिरहनु भएको छ । देशभरी हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरु विभिन्न निकायमा जिम्मेवारी सम्हाली रहनु भएका साथीहरुलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने कसैलाई पनि हामीले यहीबाट त भइस्, त भइनस् भनेर तोक्ने अवस्था रहँदैन् ।
काँग्रेसको विधानमा उल्लेख भए अनुसार पार्टीको आन्तरिक संरचना बनाउँदा निर्वाचनबाटै बनाउनुपर्छ भन्ने छ ।
तर तपाईहरु सहमति र भागवण्डाको कुरा गरिरहनु भएको छ, होइन ?
विधानमा निर्वाचन शब्द छैन । अन्तरिम संरचना बनाउने व्यवस्था छ । विधानमा निर्वाचन भनेको छैन । महाअधिवेशनबाट भनेको छ । स्थानीय निकायको अन्तरिम संरचनामा कोही पनि तोकेका मान्छे हुँदैनन् । सबै निर्वाचित मान्छे नै हुन्छन् । निर्वाचित भन्दा बाहिरको मान्छे हुँदै हुँदैनन् ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र शेखर कोइरालाले सभापतिले पार्टीलाई केही गर्न सक्नुभएन, त्यसैले पार्टी तहसनहस बनाउने काम मात्रै भयो भनेर आरोप लगाउनु भएको छ नि, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
यो कुरा हुँदै होइन । यो कुरामा कुनै सत्यता छैन । नेपाली काँग्रेस पार्टी शेरबहादुर देउवा आएपछि मात्रै गठन भएको होइन । नेपाली काँग्रेस पार्टी धेरै लामो समयदेखि छ । त्यसमा विभिन्न नेताहरुले नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ । रामचन्द्र दाइले कार्यबाहक अध्यक्ष भएर नै पार्टी संरचना गर्नुभएकै हो । हामीले सबैको नेतृत्व हेरिराख्या छौं । त्यसकारण एउटा नेतालाई दोष दिएर अथवा सभापतिलाई दोष दिएर हामी बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन ।
यसमा सामूहिक रुपमा सबैले आफ्नो–आफ्नो तह हैसियन अनुसारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । पार्टीमा यो विशिष्ट परिस्थितिमा निर्वाचन भयो । सम्पूर्ण अरु दलहरु मिले त्यो अवस्थामा हामी निर्वाचनमा पछि प¥यौ, निर्वाचन हा¥यौ । के कारणले त्यस्तो भयो भन्ने सबैलाई थाहा छ । त्यो कुरालाई जोडेर सभापतिले गर्दा यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने प्रचलन छ । पार्टीको आन्तरिक छलफलमा सबैले तर्कपूर्ण कुरा गर्दा कोही एउटालाई दोष दिन सक्दैनन् । तर यदाकदा बाहिर गएर चाँही यस्तो उस्तो भन्ने प्रचलन छ । त्यसकारण उहाँहरुको कुरामा कुनै सत्यता छैन । अहिलेको अवस्थामा पार्टीले गति लिइ राखेको छ । राष्ट्रिय जागरणको कार्यक्रमहरु भइराखेका छन् ।
अझै दुई वटा राष्ट्रिय जागरणको कार्यक्रम हुँदैछ । संसद्मा सक्रियताका साथ पार्टी प्रस्तुत भइराखेको अवस्था छ । हामीले प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरु पनि लिन गइराखेका छौं । महाधिवेशनको पूर्व तयारीमा हामी लागि राखेका छौं । त्यसकारण पार्टीले एउटा गति लिइ रहेको अवस्थामा फेरी यो या त्यो भयो, यसले यस्तो भन्यो, त्यसले त्यस्तो ग¥यो भन्ने कुरा हुँदैन । अब महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखेर कसैलाई दोष नलगाईकन महाधिवेशनतिर गएर आफू हुने तयारीमा लागे हुन्छ ।
पार्टीभित्र कमीकमजोेरी भयो भनेर सच्याउने तत्परता दुवै पक्षबाट भएको देखिदैनन् नि, तपाई पदाधिकारीहरुले किन पहल गर्नुभएन ?
एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर पार्टीमा एउटा नेताले अर्को नेतालाई निन्दा गरेर हामी कसरी बलियो हुन्छौं । यो त रुलिङ्ग पार्टीलाई बलियो बनाउने काम मात्र हो । त्यसकारण हाम्रो विपक्षी रुलिङ्ग पार्टीले जसरी हुन्छ हामीलाई कमजोर बनाउन खोजिरहेको हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी बलियो हुनको लागि हामी एकिकृत हुनुपर्छ । एक अर्कालाई गाली गर्ने र दोषारोपण लगाउन छोड्नुपर्छ ।
आफुलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुभन्दा पार्टीलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ । अवश्यपनि पार्टीको संगठनलाई गति दिनको लागि अझ तिव्रताका साथ काम हुनुपर्छ त्यसमा दुईमत नै छैन । कमिकमजोरी पनि भएका छन्, त्यसमा कमीकमजोरी भएको छैन भन्ने कुरै छैन । तर अहिले आएर सबै कमीकमजोरी भयो, पहिला त रामराज्य थियो भन्ने कुरा होइन नी त ?
पछिल्लो समय दलका नेताहरुले भूमाफिया र सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेहरुलाई कारवाही गर्नुको सट्टा उल्टो संरक्षण दिइरहेको भन्ने छ नि, तपाईलाई के लाग्छ ?
कस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ ? सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने अभियान अहिलेको सरकारको नेतृत्वमा व्यापक भएको छ । हामी त्यसको घोर विरोध गरिराखेका छौं । सार्वजनिक जग्गा एक इन्च पनि कसैले कब्जा गर्न पाउनुहुन्न, त्यसको संरक्षण गरिनुपर्छ, सुरक्षित गरिनुपर्छ । त्यसको सदुपयोग गरिनुपर्छ । त्यस्तो खालको दुरुपयोग तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।
सरकारमै बसेकाहरुले क्षणिक लाभका लागि भुमाफियाको मिलोमतोमा भुमाफियाकै हातमा दिन लागे भनेर हामीले त बारम्बार भनिरहेका छौं । संसदमा कुरा उठाइराखेका छौं । सडकदेखि सदनसम्म कुरा उठाइराखेका छौं ।
अन्त्यमा भर्खरै भारतका पूर्व विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजको निधन भएको छ, तपाई पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीको नाताले उहाँलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
सुस्मा स्वराज एकदमै उच्च राजनीतिक नेता हुनुहुन्थ्यो । भारतले पनि एउटा ठुलो असल नेता गुमाएको छ । त्यस्तै नेपालले पनि एउटा असल मित्र गुमाएको मैले अनुभव गरेको छु । म परराष्ट्रमन्त्री भएको बेलामा उहाँसँग काम गर्ने अवसर पाएको थिए । त्यो बेलामा नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही तिक्तताको अवस्था सिर्जना भयो । त्यतिबेला उहाँ पनि परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेलामा हामीले धेरै कुराकानीको आदान प्रदान गरेका थियौं ।
फेरी नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सौहार्दपूर्ण विश्वासको आधारमा विकसित गर्नको लागि उहाँले धेरै राम्रो भूमिका निभाउनु भएको छ । हामीले उठाएको कुराहरुलाई उहाँले सहज स्वीकार गरेर मन्त्रीस्तरीय दुई देशीय संरचना जुन छ, त्यसमा सहमति बन्न सक्यो । नेपाल–भारत वोर्डरमा यो वर्षामा डुबान हुन्छ, त्यसलाई समाधान गर्ने बारेमा जोवल्ट कमिटिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जहाँजहाँ प्राकृतिक रुपमा पानी बग्छ, कहाँकहाँ त्यस्ता अवरोधहरु छन्, त्यसलाई पत्ता लगाएर त्यसका आधारमा अवरोध नहुने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा पनि त्यसबेला सहमति बनेको थियो ।
उहाँले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विकसित गर्न त्यसबेला भएका जुन तिक्तताहरुलाई समाप्त पार्नको लागि एउटा प्रोएक्टिभ भुमिका निर्वाह गर्नुभयो । सहज रुपमा उहाँले सम्बन्धलाई विकसित गर्न राम्रो भुमिका खेल्नुभयो त्यो रुपमा मैले उहाँलाई सम्झन्छु । उहाँको अचानक मृत्यु हुन पुग्यो । यो दुखद् क्षणले हामीलाई पनि स्तब्ध बनायो । एउटा असल मित्र नेपालले गुमाएको मैले महसुश गरेको छु ।
२०७६ श्रावण २७, ०८: ५९: १३